Jadwalka maalinlaha ah
Caafimaad qabka ardayga
Fasalka Buuga Schoology
Ogeysiisyada Maalinlaha ah (fur daaqad / tab cusub)
Tilmaanta Qorshaha Fasalka 9aad
Luqadaha Luuqadaha (K-5)
Luqadaha Luuqada (9-12)
Ka Hortagga Rabshadaha ee OLWEUS
Abaalmarinta Charlie Parnell ee Abaalmarinta Wanaagsan ee Waxbarashada Gaarka ah
Abaalgudka Kooxda ee Wadashaqeynta-Ilmaha
Tiyaatarka Minnetonka (wuxuu ku furmayaa daaqad / tab cusub)
Bareyaasha Sharafta leh & Shahaadada Golaha Qaranka
Heshiisyada Qaybta gorgortanka
Jeegaga Asalka Tabaruca
Kheyraadka Cunnada Xagaaga
Qado Bilaash ah iyo Qiima dhimis
Diiwaangelinta Baska Dugsiga Sare
Iibso Minnetonka Stadium Iibso Dhagax Dhiga
Ka Hortagga Xoogsheegashada
Xaaladaha caafimaad ee daran
Naadiga sahaminta (Xanaanada caruurta)
Dugsiga Hoose Heerka Sare
Shabakadda Muuqaalka Shaqaalaha (ka furma daaqad / tab cusub)
Dukaanka Websaydh - LUUQAD CUSUB! (wuxuu ku furmayaa daaqad / tab cusub)
Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Wuxuu dhaqan galay Abriil 6, 2020
Ardayda iyo macallimiintu waxay raaci doonaan jadwalka fasalka ee ardayda ay ku haysan lahaayeen dugsiga oo waxay qorsheynayaan sidii ay ku qaadan lahaayeen fasaxyo isku mid ah, qado iyo guud ahaan maalinta dugsiga ay heli lahaayeen haddii dugsiga lagu jiro.
Kheyraadka Caafimaadka Maskaxda iyo Maskaxda
Teknolojiyada iyo ilaha barashada
Websaydhka Fiicnaanshaha Ardayda ee Iskuullada Minnetonka wuxuu hayaa liistada ladnaanta iyo isku xirnaanta caafimaadka maskaxda ee bulshada deegaanka oo ay ku jiraan lambarada khadka tooska ah ee laga yaabo inay faa'iido u lahaadaan adiga iyo qoyskaaga. Halkan guji si aad u aragto Kheyraadka Bulshada .
Khadadka qalalaasaha degmada, khadadka qoraalka ee dhibaatooyinka iyo ilaha loogu baahan yahay caawimaad deg deg ah, waxaad booqan kartaa websaydhka NAMI Minnesota .
Sida loo ilaaliyo Caafimaadkaaga Maskaxda inta lagu gudajiro Quarentine
Maareynta Cadaadiska iyo Welwelka - CDC
Barnaamijyada ay soo jeediyeen warbaahinta 'Common Sense Media' inay taageeraan caafimaadka maskaxda
Jooji, Ka fikir, Neefsiga App-ka Neefsashada waxaa laga heli karaa ipadka is-adeegsiga ee iPadka
Khasaaraha Guud ee Qoys ahaan
Hawlaha xasilloonida ee khadka tooska ah
Yoga iyo fiidiyooyin firaaqooyin ah oo hagitaan ah oo ku jira YouTube-ka
Galitaanka Naviance on SSO si loo sahamiyo shaqooyinka / fursadaha dugsiga sare kadib
Ku tababbaro Caafimaadka Dijitaalka iyo Fayodhawrka, sida dejinta xaddidaadda waqtiga shaashada
Websaydhka Caafimaadka iyo Fayodhawrka Dijitaalka ah sidoo kale waxay leeyihiin fiidiyowyo wargelin ah oo waxtar leh isla markaana ka hadlaya wax ku saabsan cunitaanka taleefankaaga, ka fiirsashada, nadiifinta boosaskaaga, ku shaqaysashada waxyaabaha aad jeceshahay, iwm.
Tilmaamaha Waxbarida Tech
Fur xiriiriyaha hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta oo ku saabsan aaladaha teknolojiyadda loo isticmaalo e-barashada ee Minnetonka.
HALKAN TILMAAMAHA FARSAMOOYINKA
Miiska Caawimaadda Qoyska wuxuu weli furan yahay taleefanka (fariin uga tag) 952-401-5123, ama emayl u dir Family.Helpdesk@minnetonkaschools.org . Waxay ku soo noqonayaan wicitaanno markii loo baahdo, haddii kale waxay ku jawaabayaan emayl iyo habka tikidhada / habka tikidhada. Haddii dayactir loo sameeyo ipadka loo yaqaan 'ipad', waalidiinta waa inay buuxiyaan foomkan:
Foomka Dayactirka ee iPad-ka
Fadlan la soco in dhowr bixiyeyaasha internetka ay ka shaqeynayeen sidii ay u bixin lahaayeen qorshayaal internet oo la awoodi karo. Macluumaadka ku saabsan kuwan waxaa laga heli karaa halkan: https://tinyurl.com/tonkawifi .
Ingriisigu miyaanay ahayn afkiisa hooyo ee qoyskaaga? Ka raadso ilo sidii aad ugu turjunto websaydhka, emaylka, pdfs iyo inbadan oo ka mid ah luqadaha aan Ingiriisiga ahayn.
Eeg Kheyraadka Tarjumada
Waqtiga kama dambeysta ah
Sida loo weydiiyo su'aalaha
Waqtiga diyaarinta macalinka
Coronarivus (COVID-19) Qorshe Jawaab
Ilaa daqiiqadaha cusboonaysiinta jawaabta ee iskuulada Dadweynaha Minnetonka ee coronavirus (COVID-19), e-Barashada iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo websaydhkeena gaarka ah.
Iskuxirka Iskuulka Iskuulada Dadweynaha Minnetonka